गोरा परिवारलाई आयो यति धेरै सहयोग, खुसीको आँशु झारे ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
June 8, 2021 AdminLeaveaComment on गोरा परिवारलाई आयो यति धेरै सहयोग, खुसीको आँशु झारे ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
आँखा राम्रोसंग हेर्न नसक्नाले काम पनि कतै नपाएर कतिपय रात खान नखाई बसेको पनि उनले बताएकी छिन् । उनीहरुको आर्थिक अवस्था कम्जोर हुनका कारण केहि सहयोग आउन थालेको छ। सहयोग लिएर उनीहरुकोमा पुग्दा धेरै खुसि भएका छन । थप हेर्नुहोस् भिडियोमाः